Archives des nanafika - Midi Madagasikara
Andranomanelatra : Dimy lahy nanafika, lasa ny 2 tapitrisa ariary
Redaction Midi Madagasikara 29 janvier 2014 Andranomanelatra, lasa ny 2 tapitrisa ariary, nanafika
Nisehoana fanafihana tao Merimiakatra Andranomanelatra Antsirabe II ny alin’ny alahady 26 Janoary teo. Fianakaviana iray no notafihana andian-jiolahy miisa dimy lahy, tokony ho tamin’ny 11 ora alina. Tsy nisaron-tava ireo jiolahy, tsy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ihany koa fa baraminina nanapoirany ny trano sy vato no teny an-tanany, raha ny fanazavana voaray. Teo an-davarangana no…
Ankazomiriotra : Dahalo folo lahy nanafika, voasambotra ny telo
Redaction Midi Madagasikara 10 janvier 2014 Ankazomiriotra, Dahalo, nanafika
Nisehoana fanafihan-dahalo tao amin’ny tanana antsoina hoe Ankazomanefa atsimokelin’ny tanan’Ankazomiriotra ny faraparan’ny volana desambra lasa teo. Voalaza araky ny loharanom-baovao maripotitra avy any an-toerana fa folo lahy mirongo fiadiana mahery vaika ireo dahalo. Tsy miova ny fisehon’ny fanafihana fa toy ireo fandre matetika . Poa basy avy hatrany no re vantany vao tafiditra ny tanana…
Ambatolahy : 12 lahy nanafika, lasa ny volabe
Redaction Midi Madagasikara 2 janvier 2014 Ambatolahy, lasa volabe, nanafika
Ny alin’ny 30 hifoha 31 desambara dia notafihina dahalo 12 lahy mirongo basy sy antsy ny tokantrano iray tao Ambatolahy – Mandoto. Tsy iza ity voatafika ity fa ny olona mpanangona ny « ristourne » ao an-toerana ihany. vola 840.000 ariary no norobain’ireo jiolahy tamin’izany. Nalain’izy ireo ihany koa ny taratasy « quittance » maromaro izay fanangonam-bola. Nandositra niatsinanana…
Ihorombe – Andiolava : 10 lahy nanafika ny komandàn’ny zandary
Redaction Midi Madagasikara 29 novembre 2013 Andiolava, horombe, komandàn’ny zandary, nanafika
Andian-jiolahy nironga basy “ kalach” no fantatra fa nanafika ny tranon’ny komandin’ny zandary ao Andiolava any Ihorombe tamin’ny alin’ny alatsinainy teo. Ny loharanom-baovao no nahafantarana fa tsy tao an-toerana ilay “commandant de brigade” tamin’io fotoana io,fa lasa tany Fianarantsoa. Ireo vady aman-janany sy ny mpanampy no tratran’ireo jiolahy. Nopoirin’izy ireo ny varavarana dia teo izy…